यस वर्षको आदर्श विशेष सम्मान चर्चित गायक प्रकाश सपुतलाई प्रदान गरिएको छ । बागलुङमा सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील आदर्श सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले यो वर्षको ...
लामो समयको लकडाउन र कोभिड १९ ले पारेको प्रभावपछि ठप्प नेपालको सांगीतिक माहोल पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ । देशभरका विभिन्न स्थानमा हुँदै आएका मेला मह...
पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा 'त्यही सच्चा नेपाली' बोलको देशभक्तिपूर्ण गीत सार्वजनिक भएको छ । म्युजिक नेपालको युट्युब च्यानलमार्फत् सार्व...
पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा ‘त्यही सच्चा नेपाली’ बोलको देशभक्तिपूर्ण गीत सार्वजनिक भएको छ । म्युजिक नेपालको यूट्युब च्यानलमार्फत् सार्वजनिक गीतमा ३० भन्दा बढी र अग्रज, लोकप्रिय, चर्च...
आधुनिक गीत सोल्टिनीको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । भिडियोमा दयाहाङ राई, रेविका गुरुङको अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियोका गीतमा समाजसेवी पूर्ण लिम्बु र मेलिना राईको स्वर सुन्न सकिन्छ । गीतको लिरिक्स र...
गीतकार संघको अध्यक्षमा शुभ मुकारुङ चयन
काठमाडौं । गीतकार संघ नेपालको अध्यक्षमा शुभ मुकारुङ चयन भएका छन् । संघको पाँचौं महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष चुनिएका हुन् । महाधिवेशनले उनको अध्यक्षता...
एलीना चौहान र योगेश काजीको स्वर रहेको ‘हेप्नी मलाई हेप्नी’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतकार लोकराज अधिकारीको शब्द रहेको गीतलाई ...
बिन्ध्यबासिनी म्यूजिक प्रा.लि. र गायक प्रमोद खरेलको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । बिन्ध्यवासिनीले गायक खरेलविरुद्ध प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको का...
चर्चित गीत पछाडिका कृष्ण : ‘स्टेज’ कार्यक्रमको व्यग्र पर्खाइ
कृष्ण काफ्ले नेपाली संगीत उद्योगका व्यस्त गायक हुन् । उनी होइन, उनका गीत सधै चर्चामा आउँछन् । तर उनी भने खासै चर्चामा आउन चाहँदैनन् । हालै लामो समयपछि लोक...
‘खुकुरी म्युजिक नेशन’, को–को परे शीर्ष १६ मा ? [नामावलीसहित]
खुकुरी रमले ‘खुकुरी म्युजिक नेशन प्रतियोगिता’को शीर्ष १६ प्रतियोगीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । खुकुरीले जनवरी १ मा शीर्ष १६ मा पर्न...
नयाँ वर्षको दिन भोलि अनलाइन कन्सर्ट
खुकुरी रमले नयाँ वर्ष २०२१ को अवसरमा जनवरी १ अर्थात भोलि अनलाइन कन्सर्टको आयोजना गर्न लागेको छ । नयाँ वर्ष विशेष कन्सर्टमा चर्चित एवं लोकप्रिय नेपाली...
एक्लै हुँदा परदेशमा ...
कमल राई (सिजन)को शब्द तथा स्वर रहेको आधुनिक गीत ‘एक्लै हुँदा परदेशमा...’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । यो भिडियोलाई प्रतिक्ष...
गणेश गिरिको निर्देशनमा रचना रिमाल र निरायु गौतमको ‘तिमीलाई देखेपछि’ [भिडियो]
छोटो समयमा नै नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो भिन्दै पहिचान बनाउन सफल गायिका रचना रिमालको स्वर रहेको ‘तिमीलाई देखेपछि’ गीतको म्युजिक भिडियो स...
सोल्टिनीको सफलतापछि सुनिलले ल्याए ‘दिउँला माया तिमीलाई’ (भिडियो)
लोकपप गायक सुनिल गिरी र गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ‘दिउँला माया तिमीलाई’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘दिउँला माय...
हेमन्तको गीतमा नायक दिलीप रायमाझीसँग कविताको रोमान्स (भिडयो)
लोकप्रिय नायक दिलीप रायमाझी र कविता नेपालीको अभिनय रहेको ‘के छ ज्यानलाई’ बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रिय गायक तथा ...
राजनीतिक गतिविधि तातिएको र कोरोनाजन्य कारणले चिसिएको देशको सृजनात्मक वातावरणमा शास्त्रीय सङ्गीतज्ञहरू भने पुनः पुरानै लयमा फर्कने अनुष्ठानमा जुटेका छन्। ...